Puntland oo laga roob doonay iyadoo ay jiraan abaaro - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo laga roob doonay iyadoo ay jiraan abaaro
October 3, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Boqolaal qof ayaa ka qaybgashay roob doonta ka dhacday maanta oo Isniin ah duleedka Garoowe. [Sawirka: Puntland Mirror]
Garoowe-(Puntland Mirror) Salaad roob doon ah ayaa maanta oo Isniin ag laga oogay magaalooyinka waa weyn ee Puntland iyadoo dhawaan uu iclaamiyay wasiirka cadaalada iyo diinta & awqaafta dowlada Puntland, Saalax Xabiib Jaamac.
Garoowe, duleedka waqooyi ayaa la isugu soo baxay si halkaas loogu oogo labada rakcadood ee roob doonta Ilaahayna dambi dhaaf loo weydiisto iyo raxmad.
Waxaa goobtaas isugu tagay boqolaal dad ah iyadoo madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiim Cumar Camay uu dadka kala qaybgalay salaada roob doonta.
Culumadii salaada ka qaybgashay ayaa halkaas kasoo jeediyay ducooyin badan oo ay Ilaahay uga baryayaan in uu ka dulqaado abaarta.
Gobolada Puntland ayaa waxaa ka jira abaaro baahsan, iyadoo bishaan Oktoobar la filayo in ay da’do xilli roobaadka Dayrta oo ah mida ugu yar xilli roobaadyada.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhaawacmay labo gaarina waa ay ku burbureen kadib markii madaafiic lagu garaacay xarunta wasaarada gaadiidka dowlada federaalka Soomaaliya ee Muqdisho maanta oo Axad ah. Afhayeenka dowlada hoose [...]